Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » Ukubuya kohambo lomoya eYurophu kuyasilela
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zaseGrisi zokuPhula • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Amazwe aqhube kakubi kakhulu ngalawo axhomekeke ngakumbi kukhenketho olude, njengeFrance ne-Itali kunye nezo zibeke ezona zithintelo zinzima kwaye zingazinzanga zokuhamba ezinje nge-UK, ethe yafela emazantsi oluhlu, yafumana i-14.3% kuphela Amanqanaba e-2019.
Uhambo lwaseYurophu lwasehlotyeni luye lwafika kwi-39.9% yenqanaba laphambi kobhubhane.
Umfanekiso wawuxutyiwe, kunye neendawo ezithile ezenza ngcono kunezinye.
Ukubhukisha kuye kwacotha ukuya ngasekupheleni kwexesha lasehlotyeni.
Uphando olutsha lubonisa ukuba iinqwelomoya eziya kwiindawo zaseYurophu ngoJulayi nango-Agasti zifikelele kwi-39.9% yamanqanaba angaphambi kobhubhane. Oku kungcono kakhulu kunonyaka ophelileyo (owawuyi-26.6%), xa ubhubhane we-COVID-19 wabangela ukusasazeka ngokubanzi; kwaye izitofu zazingekavunywa.
Nangona kunjalo, lo mfanekiso ubuxutywe kakhulu, ezinye iindawo zisenza ngcono kakhulu kunabanye. Kwakhona, umbono awuphucuki, njengoko ukubhukisha kucothisile ngasekupheleni kwexesha lasehlotyeni.
Ukujonga ukusebenza ngelizwe, Grisi yayikukuma ngaphandle. Iphumelele i-86% kaJulayi kunye ne-Agasti yokufika ngo-2019. Yalandelwa yiCyprus, eyafumana i-64.5%, iTurkey, i-62.0% ne-Iceland, i-61.8%. IGrisi ne-Iceland babephakathi kwamazwe okuqala ukwenza amabango abhengezwe ngokubanzi ukuba bayakwamkela iindwendwe ezigonywe ngokupheleleyo kwaye / okanye banokubonisa uvavanyo olubi lwe-PCR kunye / okanye banokubonisa ubungqina bokubuyela kwimeko yesiqhelo kwi-COVID-19.
Amazwe ahlaselwe kakubi kakhulu ngalawo axhomekeke ngakumbi kukhenketho olude, njengeFrance ne-Itali kunye nezo zibeke ezona zithintelo zinzima kwaye zinokuhamba ezinje nge UK, ethe yadlala emazantsi oluhlu, ifikelela kwi-14.3% yamanqanaba e-2019.
Ngaphandle kwezithuthi ezibiza ixabiso eliphantsi, iinqwelomoya zangaphakathi e-Yuropu zenze i-71.4% yokufika, xa kuthelekiswa ne-57.1% ngo-2019. Ukunyamalala okunxulumene neendwendwe ezinde, ezihlala ixesha elide, zichitha ixesha elininzi kwaye zijolise kwimizi ekubukeni indawo, Ukrwelelwe kumgangatho weyona ndawo intle neyona imbi kakhulu ekuhlaleni.
Ukuya eLondon kwakudanisa noko; Kwakusezantsi kuluhlu lwezona zixeko zixakekileyo zaseYurophu, ukufikelela nje kwi-14.2% ye-2019 yokufika. Olu luhlu lwalukhokelwa nguPalma Mallorca, ikwayindawo enkulu yokubhenela elunxwemeni, efikelela kuma-71.5% yamanqanaba e-2019 naseAthene, isango leziqithi ezininzi eAdriatic, ngama-70.2%. Ezona zixeko zilandelayo ziqhuba kakuhle yayiyi-Istanbul, i-56.5%, iLisbon, i-43.5%, iMadrid, i-42.4%, iParis, i-31.2%, iBarcelona, ​​i-31.1%, i-Amsterdam, i-30.7% ne-Roma, i-24.2%.
Ngokuthelekisa, iindawo zolonwabo zibonakalise ukuba zomelele ngakumbi. Uluhlu lwazo zonke iindawo eziphambili zalapha ekhaya (okt: abo banesabelo sentengiso ngaphezulu kwe-1%) babephethwe ziindawo zeholide zolwandle zemveli okanye isango kubo. Iinkokheli yayinguHeraklion kunye no-Antalya, abagqitha amanqanaba obhubhane nge-5.8% kunye ne-0.5% ngokwahlukeneyo. Balandelwa yiTesaloniki, 98.3%; Ibiza, 91.8%; ILarnaca, 73.7% kunye nePalma Mallorca, 72.5%.
Ngaphandle kwendlela ye-macro, ezinye iindawo ekuyiwa kuzo ziba ngcono okanye zibi ngakumbi ngenxa yezizathu ezithile ekuhlaleni. Umzekelo, iPortugal, eyindawo ethandwa kakhulu ngabakhenkethi base-UK, bahlupheke xa i-UK yatshintsha isikhundla sayo ukusuka eluhlaza ukuya kwi-amber ngoJuni; kwaye iSpain yabandezeleka ekupheleni kukaJulayi xa iJamani yalumkisa ngokuchasene nabo bonke ngaphandle kohambo olubalulekileyo.
Xa umntu ejonga indlela izinto ezoyikeka ngayo kukhenketho eYurophu kunyaka ophelileyo, ehlotyeni eli ibali elilulamileyo kakhulu. Ibekwe uphawu ngokuchasene namaxesha aqhelekileyo, amandla asezantsi okuqhubeka kokuhamba ngenqwelomoya, ngaphantsi kwama-40% yesiqhelo, kuye kwaba nomonakalo omkhulu kwishishini lokuhamba ngenqwelomoya. Ukungabikho okuqhubekayo kwabahambi ixesha elide, ngakumbi bevela kwiMpuma Ekude (kufikelele nje kwiipesenti ezi-2.5 zemihlaba eyandulela ubhubhane kweli hlobo) kuyakungqina ukubetha kuqoqosho lweendwendwe kumazwe aliqela aseYurophu.
Ukuba kukho into yokuthuthuzelwa, ngabantu "ukuhlala", okt: ukuthatha iholide kwilizwe labo. Ngelixa ukuhamba ngenqwelomoya kwasekhaya kunesabelo esincinci kwintengiso eYurophu ngamaxesha aqhelekileyo, ibibambe ngcono kakhulu ngexesha lobhubhane kuba khange ibe phantsi kwemiqobo ethintelayo yokuhamba. Umzekelo, iiCanaries kunye neBalearics zamkele iindwendwe ezininzi zaseSpain kunakweli xesha liqhelekileyo.